IMorocco ivala zonke izindiza zase-UK, Germany, naseNetherlands ngenxa ye-COVID-19 entsha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba Ezintsha ZaseMorocco » IMorocco ivala zonke izindiza zase-UK, Germany, naseNetherlands ngenxa ye-COVID-19 entsha
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba Ezintsha ZaseMorocco • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UK Breaking
IMorocco ivimbela zonke izindiza zase-UK ngenxa yesipikha esisha se-COVID-19 eBrithani.
Emasontweni amabili edlule, i-United Kingdom ibike amacala amasha e-COVID-19 amaningi kuneFrance, iJalimane, i-Italy neSpain ehlangene.
IMorocco ivimbela izindiza eziya nokubuya e-UK ngenxa yokuwohloka kwesimo se-COVID-19 eGreat Britain
Inkampani yaseBrazil i-EasyJet isikhansele uhambo oluphumayo olusuka e-UK luye eMorocco kuze kube nguNovemba 30.
I-TUI enkulu yaseBrithani esebenza ngamaholide isebenza namakhasimende ukuhlela ukusuka eMorocco.
Uhulumeni waseMorocco umemezele ukuthi zonke izindiza eziya nokubuya e-UK, eNetherlands naseJalimane zimisiwe ukusebenza phakathi kwamabili ngoLwesithathu.
Izikhulu zikahulumeni eRabat zithe ukuvinjelwa kwezindiza e-UK kumisiwe ngenxa yokwanda okukhulu kwamacala amasha okutheleleka nge-COVID-19 eGreat Britain.
Lesi sinyathelo, esizoqala ukusebenza kusukela ngo-23: 59GMT ngoLwesithathu, siqinisekiswe yihhovisi likazwelonke lezindiza eMoroccan, elixwayise ngokuthi lizohlala likhona 'kuze kube kukhishwa esinye isikhathi.
Isinqumo sikahulumeni sokunqabela ukuvakasha singaba nomthelela emindenini yaseNgilandi naseWales ehlela ukuya endaweni edumile yezivakashi yabantu baseBrithani ngesikhathi samaholide esiwombe, esiqala ngesonto elizayo.
Isithwali saseBrithani EasyJet, eqhuba izindiza phakathi kweYurophu ne Morocco, ukhansele ukuhamba okuphumayo kusuka e-UK kuya eMorocco kuze kube nguNovemba 30.
EasyJet usezingxoxweni nohulumeni waseMorocco mayelana nokunikela ngezindiza ezibuyisa izakhamuzi zase-UK ezizithola zibhajwe phesheya ngenxa yemingcele.
U-TUI osebenzela amaholidi amakhulu ukuqinisekisile ukuthi ukhulumile nohulumeni waseMorocco ngalesi sinyathelo, wathi inkampani isebenzisana namakhasimende ukuhlela ukuhamba kwabo ezweni laseNyakatho Afrika.
Isinqumo sokukhawulela ukuhamba phakathi kwe-UK ne Morocco kuza ngesikhathi izikhulu zaseBrithani ziqopha amacala angaphezu kwe-40,000 amasha we-COVID-19 ngosuku, futhi izwe labika ukufa kwabantu abaningi kakhulu ngosuku olulodwa kusukela ku-coronavirus kusukela ngoMashi.
Emasontweni amabili edlule, i-UK ibike amacala amasha e-COVID-19 kunaseFrance, Germany, Italy naseSpain ehlanganisiwe.
Inhloko yeqembu lesambulela saseBrithani i-NHS Confederation, uMatthew Taylor, uxwayise ngokuthi i-UK "ikhubeka enkingeni yasebusika," ishiya ezempilo "onqenqemeni."
Kodwa-ke, uhulumeni wase-UK uzichithile izingcingo zokusebenzisa imikhawulo ye-COVID-19 ngaphansi kohlelo lwayo lwe-COVID 'Plan B,' ekhipha noma yisiphi isiphakamiso sokuvalwa kobusika.